Koloneel Tiyoo-nest Bagoo-soraa (Suuraa faayilii)
Fixiinsa bara 1994 keessa gosoonni Tutsii fi kanneen eegumsa gochuufii yaalan gosoonni Hutuu 800,000 olii itti dhuman qindeessan kan jedhaman Koloneela waraana Ruwaandaa duraanii kan turan Tiyoo-nest Bagoo-soraa sambata darbe hospitaala Maalii keessatti du’an.
Maanguddoon umurii waggaa 80 Bago-Sooraa yeroo sana Rwandaaf kan hundaa’e mana murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaan yakka farra namoomaan balleessaan itti muramee hidhaan waggoota 35 itti muramee ture. Bara 1993 paartii prezidaantii Rwaandaa ka Juvenal Habiyari-mana keessatti Bagosooraan ministrii ittisaa keessatti daayiriktera Kaabinee ta’uun muudamanii dhimmootii waraanaa fi siyaasa biyyattii to’achuu qaban.
Erga Habiyaa-rimanaan bara 1994 keessa xayyaarri isaanii itti dhukaafamuun kuftee caccabuun aajjeefamanii booda Bagosooraan dhimma biyyattii to’annaa isaanii jala galchuu dhaan fixiinsa warreen Tutsii irratti raawwate ajajan jedhamuun qeeqaman.
Fixiinsa sanyii sana booda, Bagosooraan biyyaa baqachuun Kameeruun keessa maadheffatan. Bara 1996 keessa to’annaa jala oolfamuu dhaan bara 1997 keessa yakka ilaalchaaf gara Taanzaaniyaatti ergaman. Yakka ilaalchi isaanii bara 2002 jalqabuun hanga bara 2007tti ture. Bara 2008 keessa Bagosooraan hidhaa umurii guutuun adabamanis, ol iyyachuu dhaan yeroon hidhaa gad xiqqaateefii jira.